Igama lesiqhelo: ixekizumab (IX ee KIZ ue mab)
Igama lebrand: I-Taltz Autoinjector, iTaltz Isirinji egcwalisiweyo
Iifom zedosi: Isisombululo esingaxutywanga (80 mg / mL)
Udidi lweziyobisi: I-Interleukin inhibitors
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngoJuni 18, 2020. Ibhalwe nguCerner Multum.
Ixekizumab yi-immunosuppressant esetyenziselwa ukunyanga I-plaque psoriasis kubantu abadala kunye nabantwana ubuncinci iminyaka emi-6 ubudala.
Ixekizumab isetyenziswa kubantu abadala ukunyanga okusebenzayo i-psoriatic arthritis okanye esebenzayo i-ankylosing spondylitis .
Ixekizumab ikwasetyenziswa nakubantu abadala ukunyanga i-axial spondyloarthritis .
Ixekizumab inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Ixekizumab ichaphazela amajoni akho omzimba. Unokufumana usulelo ngokulula, nokuba ulosuleleko olunzulu okanye oluyingozi. Fowunela ugqirha wakho ukuba unefiva, ukugodola, ukubila, iintlungu zemisipha, ukuhla ukusinda , izilonda zesikhumba, ukuphefumla kancinci, ukukhohlela ngombala obomvu okanye opinki, ukwanda kokuchama, okanye ukuchama okubuhlungu.
Ugqirha wakho angenza iimvavanyo ukuqinisekisa ukuba awunaso isifo sephepha okanye ezinye izifo.
Akufanele usebenzise i-ixekizumab ukuba uxabisa kuyo.
idisva diskus amaxabiso ama-500/50
usulelo olusebenzayo okanye lwakutshanje;
Isifo sikaCrohn, ukudumba okwenziwa sisilonda sikabhobhosi ; okanye
isifo sephepha (okanye ukuba unonxibelelwano olusondeleyo nomntu onesifo sephepha).
Ixekizumab ayivunyelwanga ukuba isetyenziswe nangubani na ongaphantsi kweminyaka emi-6 ubudala.
Inikwa njani ixekizumab?
Ngaphambi kokuba uqale unyango nge-ixekizumab, ugqirha wakho angenza iimvavanyo zokuqinisekisa ukuba awunaso isifo sephepha okanye olunye usulelo.
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho yonyango kwaye ufunde zonke izikhokelo zamayeza okanye amaphepha emiyalelo. Sebenzisa iyeza ngokuchanekileyo njengoko kuyalelwe.
Ixekizumab itofwe phantsi kolusu. Umboneleli wezempilo unokukufundisa indlela yokusebenzisa amayeza ngokwakho.
Ixesha lesitofu sakho liya kuxhomekeka kwimeko yokuphathwa. Landela imiyalelo yonyango yakho ngokucophelela.
biotin, yenzelwe ntoni?
Funda kwaye ulandele ngononophelo nayiphi na iMiyalelo yokuSebenzisa enikwe amayeza akho. Buza ugqirha wakho okanye usokhemesti ukuba awuyiqondi yonke imiyalelo.
I-ixekizumab ayisetyenziswa yonke imihla. Idosi yakho yokuqala inokunikwa njengezitofu ezi-2 ngaxeshanye. Amanani amva anikwa kanye kwiiveki ezi-2 ukuya kwezi-4.
Iideksi ze-Ixekizumab zisekwe kubunzima kubantwana abanyangwe i-plaque yokumodareyitha Psoriasis . Izidingo zethamo lomntwana wakho zinokutshintsha ukuba umntwana uzuza okanye ulahlekelwe ngumzimba.
Lungiselela inaliti xa sele ukulungele ukuyisebenzisa. Ixekizumab kufuneka ivele njengombane ocacileyo otyheli. Sukuyisebenzisa iyeza xa libonakala lisibekele, litshintshe imibala, okanye linamasuntswana kulo. Biza usokhemesti wakho amayeza amatsha.
Musa ukushukumisa isirinji okanye ipeni yenaliti.
Umboneleli wakho wezempilo uza kukubonisa ukuba uphi emzimbeni wakho ukuze ufake inaliti ixekizumab. Sebenzisa indawo eyahlukileyo ngalo lonke ixesha utofa inaliti. Sukujoba kwindawo enye izihlandlo ezibini zilandelelana. Musa ukufaka inaliti kwindawo yolusu ene-psoriasis esebenzayo, okanye ulusu olubomvu, olwaphuliweyo, okanye ithenda.
Ixekizumab inokunyusa umngcipheko wokopha okanye usulelo. Uya kudinga iimvavanyo zonyango rhoqo.
Gcina eli yeza kwisitya sokuqala kwisikhenkcisi. Khusela ekukhanyeni kwaye ungagcini. Musa ukusebenzisa iyeza ukuba sele emkhenkceni.
i-acuplus cream cream yokunceda
Ngaphambi kokuba utofe idosi yakho, thatha ipeni yenaliti okanye isirinji ekhethiweyo kwifriji kwaye uyishiye kubushushu begumbi kangangemizuzu engama-30. Musa ukufudumeza iyeza kwi-microwave okanye phantsi kwamanzi ashushu, kwaye ungayishiyi kwilanga ngqo.
Ukuba kukho imfuneko, unokugcina ixekizumab kubushushu begumbi elikwibhokisi yayo yoqobo, ikhuselwe ekukhanyeni. Musa ukubuyisela iyeza kwifriji. Yilahle nayiphi na i-ixekizumab egcinwe kubushushu begumbi ukuba khange uyisebenzise ngaphakathi kweentsuku ezintlanu.
Ipeni nganye yokusebenzisa inaliti enye okanye isirinji ekhethiweyo yeyokusetyenziswa kube kanye. Yilahle kude emva kokusetyenziswa kube kanye, nokuba kusekho iyeza elisele ngaphakathi.
Sebenzisa inaliti kunye nesirinji kube kanye kuphela emva koko uzibeke kwisitya 'esingqiniweyo' sokungqina. Landela imithetho yelizwe okanye yengingqi malunga nendlela yokulahla esi sikhongozeli. Gcina kude nokufikelela kubantwana nakwizilwanyana zasekhaya.
Sebenzisa iyeza ngokukhawuleza, kodwa ungatsiba idosi ephosiweyo ukuba sele ilixa ledosi yakho elandelayo. Sukusebenzisa amanani amabini ngexesha elinye.
Yintoni endifanele ukuyiphepha ngelixa ndisebenzisa ixekizumab?
Ungabelani nge-ixekizumab nomnye umntu , nokuba baneempawu ezifanayo.
Musa ukufumana isitofu sokugonya 'bukhoma' ngelixa usebenzisa i-ixekizumab. Amachiza aphilayo aquka imasisi, uqwilikana, irubella (MMR), irotavirus, typhoid, yellow fever, varicella (chickenpox), zoster ( amatyathanga ), kunye nogonyo lwempumlo (umkhuhlane).
Iziphumo ebezingalindelekanga zeIxekizumab
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu uxabane: irhashalala; ukuqina kwesifuba, ukuphefumla okunzima; uziva ngathi ungadlula; ukudumba kobuso bakho, iinkophe, imilebe, umlomo, ulwimi, okanye umqala.
urhudo (inokuba ligazi), isisu;
ukugruzuka ngokulula, amabala emfusa okanye abomvu phantsi kolusu lwakho;
umkhuhlane, ukugodola, iintlungu zemisipha;
izilonda ezibuhlungu zolusu;
ukukhohlela, ukuphefumla kancinci, ukukhohlela ngombala obomvu okanye opinki;
ukwanda kokuchama, iintlungu okanye ukutshisa xa uchama;
izilonda okanye amabala amhlophe emlonyeni wakho okanye emqaleni (usulelo lwegwele okanye 'i-thrush'); okanye
iimpawu zesifo sephepha: umkhuhlane, ukukhohlela, ukubila ebusuku Ukuphelelwa ngumdla wokutya, ukunciphisa umzimba, kunye nokudinwa kakhulu.
iintlungu okanye ububomvu apho iyeza lafakwa khona;
usulelo lomngundo; okanye
iimpawu ezibandayo njengempumlo exineneyo, ukuthimla, umqala obuhkungu .
Ulwazi lwedosi ye-Ixekizumab
Ngokwesiqhelo idosi yabantu abadala yePlaque Psoriasis:
I-160 mg (inaliti ezimbini ezingama-80 mg) kwisithuba seveki 0, ilandelwa ngama-80 mg kwiiveki ezi-2, 4, 6, 8, 10, no-12, emva koko i-80 mg rhoqo kwiiveki ezi-4
Sebenzisa: Ukunyanga abantu abadala abane-plaque psoriasis yokumodareyitha abaxakekileyo kunyango lwenkqubo okanye unyango lwefototherapy
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala ye-Psoriatic Arthritis:
I-160 mg (inaliti ezimbini ezingama-80 mg) kwisithuba seveki 0, ilandelwa ngama-80 mg kuzo zonke iiveki ezi-4
-Ngabaguli be-psoriatic arthritis abane-psque ye-plaque psoriasis, sebenzisa irejimeni yedosi ye-plaque psoriasis.
Eli chiza linokulawulwa lodwa okanye ngokudibeneyo nesiyobisi esiqhelekileyo sokuguqula isifo (cDMARD) (umzekelo, imethotrexate ).
Sebenzisa: Ukunyanga abaguli abadala abane-psoriatic arthritis esebenzayo
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala ye-Ankylosing Spondylitis:
Ihlala ixesha elingakanani i-gabapentin
-cDMARDs (umzekelo, isulfasalazine ), Iicorticosteroids, iziyobisi ezingezizo ezokulwa nokudumba ( Ii-NSAID ), kunye / okanye iintlungu inokusetyenziswa ngexesha lonyango ngeli chiza.
Sebenzisa: Ukunyanga abaguli abadala abane-ankylosing esebenzayo spondylitis
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela ixekizumab?
Amanye amachiza anokuchaphazela i-ixekizumab, kubandakanya amayeza kagqirha kunye neekhawuntareni, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nalo naliphi na iyeza oqala okanye uyeke ukulisebenzisa.
Yintoni reglan yento
Ungathatha i-sudafed kunye ne-benadryl kunye
Iswekile yegazi lomntwana eliphantsi
Iifowuni zenkomfa kwi-iphone 5
Ukuhlengahlengiswa kwemathiriyeli ukuhlengahlengiswa kwemigca